टुक्रिएको नेकपामा ओली र प्रचण्ड–नेपालको आ–आफ्नै दाबी, को आधिकारिक ? – Mission Khabar
टुक्रिएको नेकपामा ओली र प्रचण्ड–नेपालको आ–आफ्नै दाबी, को आधिकारिक ?
काठमाडौं । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले ५७ वर्ष पुरा गर्दैगर्दा अधिकांश कालखण्डमा कम्युनिष्ट घटकहरु टुटफुट र बिग्रहमा रमाएको पाइन्छ । लामो टुटफुट र बिग्रहको बाटो सच्याउने उद्घोषसहित २०७५ मा जेठ ३ मा दुई ठूला वाम घटक (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) बीच भएको पार्टी एकीकरण २९ महिना नपुग्दै दुई टुक्रामा विभाजित बनेको छ ।
निर्वाचन ऐन अनुसार पार्टी फुटेको अवस्थामा केन्द्रिय समिति र संसदिय दलको ४० प्रतिशत सदस्य आफूसँग रहेको दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपी संसद विघटनको अवस्थामा भएका दुबै भेलाले आफू बैद्यानिक भएको दाबी गरिएको छ । पार्टी सञ्चालन पद्धति तथा त्यसका निर्णयहरुले समेत कुन धार बैधानिक भन्ने अर्थ राख्ने जानकारहरुले बताउने गरेका छन् ।